မှတ်စုတို (Page 2)
မှတ်မှတ်ရရ ပထမဆုံးအကြိမ် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ပြီး အိမ်ပြန်တဲ့အချိန်ကြတော့ ဘဝမှာ achievement တစ်ခုပဲအောင်မြင်သွားသယောင်ယောင်၊ အပြစ်တစ်ခုခုပဲ လုပ်လိုက်မိသယောင်ယောင်နဲ့ စိတ်ထဲ မတင်မကျရယ်။
By Arkar Aug 21, 2020
မျှော်လင့်ချက်တွေ တစ်ပွေ့တစ်ပိုက်နဲ့ ကိုယ်လုပ်ယူလို့မရတဲ့ ကိုယ်မပိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ကို လှမ်းမျှော်ရင်း မုန်းတိုင်းစဲရင် နေသာမယ်၊ တိမ်မဲတွေရဲ့ အနားသတ်ဟာ ငွေရောင်ဘောင်အနား ကွပ်ထားလိမ့်မယ် မျှော်လင့်နေမိတုန်းပဲ။
By Myint Myat Chan Aug 15, 2020
ဒီရက်ပိုင်း covid ကာလမှာ အလုပ်တွေကလည်း မယ်မယ်ရရ လုပ်စရာသိပ်မရှိဘူး။ ကိုယ့် Product နဲ့ပတ်သတ်ပြီး campaign တွေလည်းသိပ်မလုပ်ဖြစ်ဘူး.... လုပ်လည်းသေးသေးကွေးကွေးဘဲ.... ဘာလို့လဲဆိ
By T4M Aug 2, 2020
Etymotic ER4S microPro (Review)
etymotic ဟာ နားကြပ်တင်မက Hearing Device တွေပါထုတ်တဲ့ ကုမ္ပဏီပါ။ Ear Canal နဲ့ပတ်သတ်ပြီး device တွေကိုဘယ်လို design ထုတ်ရမလဲဆိုတာ ကောင်းကောင်း အတွေ့အကြုံရှိပါတယ်။ အခုထက်ထိကို Noise Cancellation
By Kelvin Morris Jul 15, 2020
By Myint Myat Chan Jul 8, 2020
Google မှာ Mechanical Keyboard လို့ ရိုက်ရှာလိုက်ရင် အများဆုံးတွေ့ရတာက Gaming Mechanical Keyboard တွေပဲဗျ။ ကိုယ်ကလည်း အဲ့လိုကြောင်ကြောင်ကြားကြားနဲ့ ဂိမ်းရုပ်ပေါက်တဲ့ Keyboard တွေကို နဂိုကတည်းက မကြိုက်။
By Zero Jul 3, 2020
လွန်ခဲ့သော 1992 မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ Tanenbaum-Torvalds debate ရဲ့ Origin Thread ကို ဖက်ကြည့်ရင်းကနေ အခု Article ကို ရေးဖြစ်သွားတာပါ။ အခု Article က Tanenbaum-Torvalds debate အပေါ်မှာ အခြေခံထားတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ Kernel Design ပိ
By Zaw Zaw Jun 21, 2020
Twitter မှာ Developer တွေက သူတို့ ဆင်ထားတဲ့ Keyboard တွေ ကြွားကြွားနေကြလို့ Keyboard တွေအကြောင်း လေ့လာဖြစ်သွားတယ်။ ဒါတွေကတော့ ကျွန်တော် လေ့လာမိသမျှ Mechanical Keyboard တွေအကြောင်းပါပဲ။
By Zero Jun 19, 2020
၁၉၉၀ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၁၀ ခုနှစ် အလွန်ပိုင်းမှာ မြို့ထဲမှာ နေဖြစ်ခဲ့တော့ အမှတ်တရဖြစ်စရာတွေ အများကြီးရှိပေမယ့် အဲဒီထဲက တစ်ခုကတော့ ဘိန်းစားတန်းပါပဲ။ ဘိန်းစားတန်းဆိုပေမယ့် ရုပ်ရှင်ထဲကလို ဘိန်းစားတွေ နှပ်နေတဲ့နေရာတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ပစ္စည်းအတိုအစ အဟောင်းအမြင်းတွေရောင်းတဲ့ ဈေးကို ပြောတာပါ။
By Kelvin Morris May 16, 2020
By Myint Myat Chan May 9, 2020
များသောအားဖြင့် သိမ်းဖြစ်တာတွေက အဖေ့လို လိုအပ်တဲ့အချိန်သုံးဖို့ ပစ္စည်းတွေမဟုတ်ပဲ ကိုယ်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အမှတ်တရအရာမို့လို့ သံယောဇဥ်မပြတ်လို့ မလွှတ်ပစ်ရက်ပဲ သိမ်းထားလိုက်တဲ့ အရာတွေများတယ်။
By Arkar May 4, 2020
Your Digital Product is PainKiller or Vitamins?
ကိုယ့်ရဲ့ Digital Product က Vitamin ဖြစ်စေတဲ့ Product လား? ဒါမှမဟုတ် Painkiller ဖြစ်စေတဲ့ Product လား? ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့် ဒီမေးခွန်းတွေကို မေးသင့်လဲ?
By T4M Apr 28, 2020
By Zero Apr 26, 2020
မိအေး ကားစမောင်းတတ်တာ တက္ကသိုလ် တက်နေတုန်း။ အဖေနဲ့ အမေက နယ်မှာနေကြတယ်။ ရန်ကုန်မှာ မောင်နှမသုံးယောက်က တိုက်ခန်းလေးနဲ့ အဖေ့အလုပ်ကရတဲ့ ဆလွန်းကားလေးကို ရန်ကု
By Myint Myat Chan Mar 21, 2020
ပြာလဲ့လဲ့ ကောင်းကင်ကြီးပေါ်မှာ တိမ်တွေ အဆုပ်လိုက် အဆုပ်လိုက် ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့ ရွေ့လျားနေတာတွေလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ ပြုံးမိတယ်။
By Myint Myat Chan Mar 11, 2020
Basic User Journeys (Research)
ကျွန်တော်တို့ဟာ Product ကို ဖန်းတီးတဲ့နေရာမှာ feature အသေးလေးကအစ အဆင်ပြေလောက်လား? User တွေရော အသုံးဝင်ပါမလား? စသဖြင့် အချိန်ကုန်ခံပြီး စဥ်းစားရပါတယ်။ အဲ့လို အချိန်ကုန်ခံပြီးလု
By T4M Mar 9, 2020
Designing Distributed Systems (စာညွန်း)
ဟိုတလောက ရုံးက Architecture ပိုင်းအသစ်တိုးရမှာရှိလို့ Devine ညွှန်းတဲ့ စာအုပ်ကို ဖတ်ဖြစ်တယ်။ နာမည်ကလည်း ခပ်ဆင်ဆင်ဆိုတော့ Martin Kleppmann [https://www.linkedin.com/in/martinkleppmann/] ရေးတဲ့စာအုပ်လို့ ထင်လို့ ဖတ်
By Kelvin Morris Mar 7, 2020
အခက်အခဲ၊ အတွေ့အကြုံများ နဲ့ Product Research နည်းလမ်းအချို့
Product Research လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ တော်တော်များများသော် Digital Product မှာပါဝင်တဲ့ Stakeholder တွေ မေ့နေကြတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ အချို့လည်းသိလျက်နဲ့ Product Deliverly time အရမ်းကပ်နေလို့ မသိချင်ယောင်ဆောင်ခဲ
By T4M Feb 29, 2020
နည်းပညာပိုင်း၊ Web Development ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော် အမြဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တဲ့ Blog တွေ Website တွေရှိပါတယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေအတွက်လည်း အသုံးဝင်မယ်ထင်လို့ စာရင်းပြုစုပြီး ပြန်မျ
By Zero Feb 29, 2020
By Myint Myat Chan Feb 25, 2020
By Kyaw Kyaw Soe Feb 22, 2020
ကိုယ်တွေ သိသလောက်တော့ SailsJS developer ဆိုလို့ တစ်နိုင်ငံလုံး ကိုယ်တွေ တစ်ယောက်ပဲ ရှိတယ်ထင်တယ်။ အခုထိ အခြားလူတွေ အဲ့ဒါသုံးပြီး project လုပ်နေတာ မတွေ့ဖူးဘူး။ ရှိရင် ကျွန်တော့်နဲ
By Ao Feb 18, 2020
Developer နှင့် Client ကြားက အကြောင်း အရာများ
Developer အများစုက introverts တွေဖြစ်တဲ့အလျှောက် အခုလိုမျိုး တခြားသူတွေနဲ့ စကားပြောဆိုရတာမျိုးကို သိပ်ပြီးတော့ ဘဝင်မကျတတ်တဲ့အတွက် သူတို့တွေအတွက် အလေ့အကျင့်ရသွားဖို့အတွက် အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုကတော့ လိုအပ်တယ်။
By K Feb 15, 2020
ပန်းသီးပုံ ကွန်ပျူတာမှာ သူ့ရဲ့ စနစ်ကို သိပ်မသုံးတတ်၊ ရုံးက မြန်မာစာတွေ ရိုက်ရခက်တာမို့၊ ကိုယ်သုံးတတ်တဲ့ ဝင်းဒိုးတင်သုံးတာ ပိုးကောင်ကိုက်လိုက်တာဆိုပဲ။
By Myint Myat Chan Feb 11, 2020
လတ်တလော အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ မှတ်စုတို page ကနေ request လုပ်ခံရတဲ့ topic နှစ်ခု ရှိပါတယ်။ ပထမ တစ်ခုကတော့ Git အကြောင်း ဖြစ်ပြီးတော့ နောက်တစ်ခု ကတော့ Reddit ပါ။ Git အကြောင်းကတော့ Zero က
By Kelvin Morris Feb 8, 2020
Dark Theme in Flutter
Flutter မှာ App တစ်ခုလုံးအတွက် အရောင်တို့ဘာတို့ ထားချင်ရင် Material App Widget ကြေငြာတဲ့ အချိန်မှာ တစ်ခါထဲ ကြေငြာလို့ရပါတယ်။
By The Frozen One Feb 5, 2020
By Zero Feb 1, 2020
ဥပမာ ကမ္ဘာရဲ့တဖက်ခြမ်းမှာရှိ သာမန်လူတစ်ယောက်ရဲ့ webcam ကိုလှမ်းကြည့်နိုင်စွမ်းရှိပြီး မျိုးစုံထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာ ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရ ဖြစ်နိုင်မှန်းသိပင်သော်ညား တကယ်ကြီး လုပ်ကြတယ်လို့ ကြားတဲ့ အခါ လန့်စရာကြီးပါပဲ။
By Kelvin Morris Jan 11, 2020
၂၀၁၉ မှာ ဖတ်ခဲ့သမျှ
By Zero Jan 9, 2020
Serverless ဆိုတဲ့ စကားလုံးက နည်းပညာလောကမှာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လူပြောသူပြောများလာတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် Website တစ်ခု သို့မဟုတ် API တစ်ခုအတွက် Server ဆိုတဲ့ အရာက မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အရာတစ်ခု။ သို့သော် နံမည်ကိုက Serverless လို့ ဆိုလာတဲ့အတွက် ...
By Arkar Jan 2, 2020
လွန်ခဲ့တဲ နှစ်ကာလ အပိုင်းအခြားတွေက ကိုယ်ကျင်လည်ခဲ့တဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းတွေထဲမှာ ကုဒ်ရေးစားတဲ့သူ ပီပီ stackoverflow ကိုသုံးခဲ့ပေမယ့် ကိုယ်ကလည်း ဂျပန်ကာတွန်းကို ကြည့်တဲ့သူဆိုတော့ Stackoverflow ကနေပဲ လုပ်တဲ့ Anime StackExchange လို့ခေါ်တဲ့ Q&A ဆိုဒ်လေးထဲမှာ ကျင်လည် ခဲဲ့တယ်။
By Kelvin Morris Dec 31, 2019
မနှစ်ကနဲ့ နှိုင်းစာရင်တော့ ကိုယ်ဖတ်တဲ့စာအုပ်က အစုံမဖြစ်ပဲနဲ့ အုပ်စုလိုက် ပိုဆန်သွားတာ သတိထားမိတယ်။ ဥပမာ အလုပ်နဲ့ပတ်သတ်တာရယ် ၊ ကိုယ် အရမ်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာမျိုးတွေကို ပိုဖတ်ဖြစ်သွားတယ်။
By Kelvin Morris Dec 21, 2019
By Ao Dec 15, 2019
လူတိုင်း အထီးကျန်တယ်လို့ ခံစားဖူးကြတာပါပဲ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်ကို ပြောင်းရတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နေ့လည်စာတူတူစားဖို့ အဖော်မရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အလုပ်နားတဲ့ရက်တွေမှာ ကိုယ့်ကိုယ်အချိန်ပေးမယ့်သူ မရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။
By Arkar Dec 14, 2019
ကိုယ် သတိထားမိတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အကြီးမား ဆုံးအားနည်းချက်ထဲမှာ အချိန်ကို စီမံခန့်ခွဲတာပဲ။​ တစ်ခုခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် စိတ်ပါရင် ဝုန်းဒိုင်း ထလုပ်လိုက်ပေမယ့် စိတ်မပါတဲ့ အချိန်ဆိုရင် ထိကို မထိချင်တော့တာ။​ ဒါကို သတိထားမိတာတော့ ကြာပြီ။ မှတ်မှတ်ရရ ငယ်ငယ်ထဲကပဲ။
By The Frozen One Dec 10, 2019
By Zero Dec 8, 2019
GoManga - Manga Downloader
အခုလက်ရှိတော့ MangaRock ကဒေါင်းလော့လုပ်တာထက်တောင် မြန်ပါသေးတယ်။ တခုတော့ရှိတာပေါ့ Connection ကောင်းဖို့ရယ် အဲဒီဆိုဒ်တွေက ခွင့်ပြုရယ်ဖို့တော့ လိုတာပေါ့။
By Kelvin Morris Dec 3, 2019
Raiding Experience in FFXIV
ပုံမှန် normal raid တွေမှာဆိုရင် boss spell တွေကို ရှောင်ရလွယ်အောင် လုပ်ပေးထားပေမယ့် Savage raid တွေကျတော့ အဲ့ဒါမျိုးတွေမပါတော့ဘူး။ Normal raid က boss spell တွေပဲဆိုပေမယ့် ကိုယ်က ဘယ် spell ဆိုရင် ဘာလုပ်ရတယ်ဆိုတာ မှတ်မထားရင်တော့ အဲ့ဒီအတွက်ကိုပါ အချိန်တော်တော်ယူရတယ်။
By K Nov 30, 2019
Website တစ်ခု ဖြစ်လာဖို့
Website တစ်ခုလုပ်ဖို့ ဘာတွေလိုလဲ။ အဲ့မေးခွန်းတွေအတွက် အဖြေကို ဒီ Post ထဲမှာ ရှာတွေ့လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
By Zero Nov 19, 2019
By Kelvin Morris Nov 16, 2019
By Zero Nov 14, 2019
ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်ကြီးမှာ လူဖြစ်နေရတဲ့အခါကျတော့ လူတွေရဲ့နေ့စဥ်ဘဝထဲကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းမျိုးစုံရဲ့ အရှိန်အဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့ တိုးဝင်လာနေမှုကို တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းနဲ့ ကြုံတွေ့နေရတာပါပဲ။
By Arkar Nov 4, 2019
Mongodb နှင့် Data ကြီးများ ( ၁ )
Mongodb နဲ့ ပတ်သက်ပီး အရင်ကတော့ တခါရေးဖူးပါတယ်။ အဲ့တုန်းက Mongodb ဆိုတာ ဘာကိုခေါ်သလဲ။ ဘာတွေ လုပ်လို့ရသလဲ လောက်ပဲ ရေးဖြစ်တာ။ အခု နှစ်ပိုင်းမှာ Mongodb ကို Big data တွေနဲ့ နှဖူးရော ဒူးရော တွေ့တော့ ကိုယ်လုပ်ခဲ့ တာလေးတွေ ကို စာတတန် ပေတတန်နဲ့ ရေးရင်ကောင်းမယ် စိတ်ကူးမိတယ်။
By Aitin Oct 29, 2019
ဒါပေမယ့် တူရိယာ တွေအများကြီး တီးတဲ့ layer အများကြီးနဲ့ သီချင်းတွေဆိုရင်တော့ တခုချင်းစီကို detail ကြားရတယ်အထိ ခွဲထားတာပါ။ အဲဒီလိုနေရာမျိုးဆိုရင်တော့ ZSN Pro နဲ့က လုံးဝကို ကွာထွက်သွားတာပါ။
By Kelvin Morris Oct 25, 2019
အရင်တုံးက Manga ဖတ်မယ်ဆိုရင် သူငယ်ချင်းတွေ အကုန်နီးပါက ဖတ်လေ့ရှိတော့ အွန်လိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ် အပြင်မှာဖြစ်ဖြစ်တွေ့တာနဲ့ အချင်းချင်း ဘယ်ဟာဖတ်လဲ ဖလှ
By Kelvin Morris Oct 18, 2019
အများအားဖြင့် မြန်မာဂိမ်း community တွေမှာ MMORPG တွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး မေးလေ့ ပြောလေ့ရှိတာက ဘယ် MMORPG က အကောင်းဆုံးလဲ။ ဘယ်ဟာက ဆော့လို့ပိုကောင်းသလဲ စသည်ဖြင့်ပေါ့။ အဖြေတွေကလည်း အမျိုးမျ
By K Oct 14, 2019
ကိုရန်နိုင်စာအုပ် review ရေးတာ ဖတ်ပြီးတော့ ကိုယ်လည်း ဖတ်ပြီးတဲ့စာအုပ် review ရေးမယ် ကြံပြန်တော့ ကိုယ်နောက်ဆုံးဖတ်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်နဲ့က အတော်ဝေးသွားပြီးဆိုတော့ သိုးဆေ
By Kelvin Morris Oct 9, 2019
ကြိုင်သင်းဆိုတာ နန်းရှေ့ ရေနီမြောင်း အနောက်ဖက် သိပ်မဝေးတဲ့နေရာ ၁၉ လမ်းပေါ်မှာ ရှိတဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်။ နန်းရှေ့သားမှန်ရင် ကြိုင်သင်းကို မသိတဲ့သူမရှိဘူး။ ကိုယ်တွေ မူလတန်
By Zero Oct 4, 2019
By Arkar Oct 1, 2019
FF7R နှင့် ကျွန်တော်
ကိုယ်ပထမဆုံး စဆော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Final Fantsay Series က Final Fantasy IV ဆိုပေမယ့် တကယ်တမ်း FF Series ကို အရမ်းစွဲလမ်းသွားတာက Final Fantasy7လို့ပဲ ပြောရမယ်။ ပထမဆုံးစဆော့ဖြစ်ခဲ့တုန်းက အရမ်းလည်းငယ်သေးတော့ ကိ
By K Sep 30, 2019